Antoko AKFM Manohitra ny fitondrana mpivarotra tanindrazana
Nankalazaina teny amin�ny foibeny teny Andrahavoahangy ambony ny sabotsy 10 novambra teo ny faha-58 taona nijoroan�ny Ankoton�ny Kongresin�ny Fahaleovantenan�i Madagasikara na ny AKFM.
Nandritra io fotoana io no nanehoan’ny antoko ny heviny momba ny raharaham-pirenena ka nilazan’ny filohany Rakotomanga Eric fa manohitra ny fitondrana izy ireo. Tsy eken’ny antoko ny fivarotana tanindrazana ataon’ny mpitondra ankehitriny, raha ny fanehoan-keviny. Toherin’ny antoko ihany koa ny politika ampiharin’ny frantsay eto dia ilay antsoina hoe « France-Afrique » izay mbola endriky ny fanjanahantany. Ny vazaha no mibaiko sy mandidy fa tsy afaka ny hamolavola izay paikadim-pampandrosoana mety amintsika isika raha jerena amin’ny zava-misy. Ambaran’ny AKFM fa programa no tokony hapetraka fa tsy olona amin’ny fampandrosoana ny firenena ka nilazan’izy ireo fa efa vonona ny azy ny programa hoenti-manarina ny firenena fa ny fifidianana hametrahana izay olona hanatanteraka izany sisa andrasana. Isan’ny antoko efa tranainy ity antoko ity ary maneho fa teo foana tamin’ny fivoaran’ny raharaham-pirenena. Somary takona ihany ity antoko ity na dia efa isan’ny ela nijoroana ihany aza ary anisan’ny vavolombelon’ny tantaram-pirenena. Tsy hay na ny foto-kevitra no tsy takatry ny olona na ny serasera no tsy ampy ka mila hatsaraina.